दुई वर्षभित्र नेपालको बिजुली बङ्गलादेशले बाल्नेछः राजदूत मिश्र(अन्तरवार्ता) - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 Last updated Feb 4, 2020 78
हामीले यहाँ जनवरी ७ तारिखमा भ्रमण वर्षको शुरुआत ग¥यौँ । त्यसदिन यहाँका विभिन्न क्षेत्रका झण्डै ४०० मानिसलाई सहभागी गराएर भ्रमण वर्षको भव्य कार्यक्रम ग¥यौँ । डिजिटल प्रस्तुति, फोटो प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रम ग¥यौँ । भ्रमण वर्षका लागि तीन जना बङ्गलादेशीलाई सद्भावनादूत बनाएका छौँ । उहाँहरु प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ । बङ्गलादेशबाट पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभएका एमए मोहित हुनुहुन्छ । उहाँले दुईचोटि सगरमाथा आरोहण गरिसक्नुभएको छ र दुई दर्जन अन्य हिमाल चढिसक्नुभएको छ । उहाँ नेपालमा हरेक वर्ष दुई पटक टिम लिएर जानुहुन्छ । उहाँ चढेको एउटा चुचुरालाई ‘नेपाल बङ्गलादेश फ्रेन्डसिप पिक’ नै नामकरण गरिएको छ । यहाँकी प्रसिद्ध गायिका मेहरिनलाई पनि सद्भावनादूतमा नियुक्त गरेका छौँ र अत्यन्तै लोकप्रिय सिने कलाकारलाई पनि जोडेका छौँ । उहाँहरुको सहभागितामा विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौँ । प्रवचन, प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गर्ने सोच छ । यहाँका १० पत्रकारलाई नेपालमा सद्भावना ट्रिपमा पनि पठाएका थियौँ । उहाँहरुले यहाँ आएर विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख, समाचार लेखिरहनुभएको छ । अर्काे कुरा, विभिन्न छोटा डकुमेन्ट्री बनाएर प्रदर्शन गर्ने सोच पनि बनाएका छौँ ।
अहिले हामीले गर्नुपर्ने चार कुराहरु छन् । अघि भनेजस्तै मुख्यतः कनेक्टिभिटी हो । दोस्रो भनेको व्यापार हो । त्यो व्यापारमा पहिलो नम्बरमा ऊर्जा हो । हामी बङ्गलादेशलाई ‘ग्रिन इनर्जी’ दिन सक्छौँ, नवीकरणीय ऊर्जा दिने भनेको जलविद्युत् हो । त्यसमा उहाँहरुको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, संयुक्त लगानी गर्ने या हामीले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई बङ्गलादेश पठाउने र एउटा प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो विषय नजीक पुगेको छ, धेरै सम्झौता भएको छ । भारतले पनि मञ्जूर गरिसकेको छ । तेस्रो भनेको पर्यटन हो । भिसा र कनेक्टिभिटीको समस्या समाधान गर्दै प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने मुख्य विषय छ । अर्काे भनेको नियमित भ्रमण र सम्बन्ध आदानप्रदान जरुरी छ । बङ्गलादेश प्रविधिमा धेरै अघि बढिसकेको छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यसबाहेक वस्तु व्यापार हो । नेपालमा भएका धेरै कुरा चिया, कफी अम्रिसो, अदुवा, अलैँची, दालचिनी, दाल, फलफूल तरकारी, धागो पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ । धागोको असाध्यै माग छ यहाँ । चीनबाट यहाँ ल्याइरहेका छन् । यस्ता वस्तु निर्यातमा पनि केही समस्या छन् । त्यसका लागि व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न कुराकारी चलिरहेको छ । अनि विकास गर्न सहकार्यात्मक अवधारणा अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ ।
नेपाल बङ्गलादेशबीच सबैभन्दा प्रगति भएको क्षेत्र नै ऊर्जा हो । विगतमा यसमा केही समस्या थिए जस्तै भारत भएर हामी ल्याउने कसरी ? त्यसका लागि भारतसँग लामो छलफल भयो । भारतले अन्ततः दुई वटा कुरा मञ्जूर गरिसकेको अवस्था छ । हाम्रो डेडिकेटेड विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउने कुरा महत्वपूर्ण थियो । त्यसमा भारतले मञ्जूर गरिसकेको छ । अनि विद्युत् प्रवाह गर्न दिन पनि उनीहरु तयार भएका छन् । यो ठूलो उपलब्धि र सकारात्मक कुरा हो । धेरै छलफलपछि बङ्गलादेशले नेपालमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बिजुली किन्ने लिखितै सम्झौता भएको छ । खाली कुनकुन लिने, कसले लिने र कसले लगानी गर्ने भन्ने व्यवहारमा प्रयोग गर्न मात्रै बाँकी छ । त्यसमध्ये एउटा भारतीय जलविद्युत् कम्पनीले बनाइरहेको नेपालको विद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट बङ्गलादेशले किन्ने भनेर अर्काे सम्झौता पनि भइसकेको छ । विद्युतीय आदानप्रदानको कुरा निकै अगाडि बढेको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको देख्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । बङ्गलादेश कुनै जमानामा अनिकालग्रस्त थियो । मानिसको मृत्यु कहालीलाग्दो थियो । यहाँ बाढी, समुद्री आँधीले सधैँ सताउँछ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ । यस्तो देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर अब निर्यात गर्न थालेको छ । अविकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको देशमा उक्लिसकेको छ । हामी नेपालीले पहिलो सिक्नुपर्ने यही हो । यहाँ तीन बाली धान हुन्छ । हाम्रोमा किन हुँदैन ? तराईमा त होला नि । तपाईं अहिले पनि बङ्गलाबन्दको सीमानाका जानुभयो भने नेपालमा भारीका भारी मकै र आलु गइरहेको छ । कृषिमा उनीहरु कसरी फड्को मारे, त्यो हामीले सिक्नुपर्छ । मचान बनाएर माथि तरकारी तल माछा पालिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् । ‘डिजिटल बङ्गलादेश’को स्लोगन बनाएर काम गरिरहेका छन् । आफ्नै स्याटलाइट ‘बङ्गबन्धु स्याटलाइट एक’ बनाइसके । यहाँका टेलिभिजनले आफ्नै देशको स्याटलाइट प्रयोग गर्ने भनेर कानून नै बनाइसक्यो । व्यावहारिक प्रविधिले कसरी यहाँको सामाजिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्यो भनेर सिक्न सक्छौँ । शैक्षिक र अनुसन्धानको तहमा आदानप्रदान गरेर एक अर्काबाट सिक्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७६, मंगलवार ०८:५३